aaungygn on Wed May 04, 2011 4:33 am
“ကဲ့လုပ်ပါဦး”
“အလကာ့း့ လာမောကြီးနော်”
“ရှင့့် ”
“ဟင့် ခွချင်တယ်”
“ကြည့်လေ့ ရော့”
“ဟင့်”
“ကိုစစ်အောင့့် ”
“ဖြန့်း့ ဖြန်း”
“နွယ့်တိတ်ပါတော့နော်”
“ရှင့်ရှင့်အပြင်ကိုထွက်သွားပါ”
လေ၊ဒါကြောင့်နွယ့်ခန္ဓြွာကိုယ်လေးကိုမပိုင်ရမယ့်အတူတူခဏလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားရအောင့်”
“နားထောင်စမ်းနွယ်၊ကိုယ်လေနွယ်ကိုယ်လေးကိုဖက်ပြီးဒီလို့”
“အ့ဟင့်အင်း၊ဟင့်အင်း”
“အာ့းကျေးဇူးပဲနွယ်ရယ်၊အားအား”
“အို့ကျွတ်ကျွတ်၊မလုပ်ပါနဲ့”
“အို့ထူးထူး၊မထူးထူး”
“အင့်းအဟင့်ဟင့်၊ အဟင့်”
“ဟွန့်းမသိဘူး”
“အ့အအား ၊ရှီးကျွတ်ကျွတ်”
“အာ့မသိဘူး”
“ဟင့်အင်း ၊ မသိဘူး”
“အာ့အဟင့်အဟင့်၊ကျွတ်”
“ပြွတ့်ပလွတ်”
“ဗြစ်ဗြစ့်ပြွတ့်ဗြစ်”
“အိ့အ အအာ့းကြပ်တယ်၊ကြပ်တယ်၊အားနာတယ်၊နာလိုက်တာနော်၊အီးအားအအ”
“ဗြစ့်ဗြစ့်ဗြစ်”
“အ့ အမေ့ ၊ ကွဲ့ကွဲပြီ ၊အအားအား”
“ဗြစ့် ဖွတ်”
“သေပြီ ၊ အားအ ကျွတ်ကျွတ့့် ”
“ပြွတ့် ဖတ် ၊ပြွတ်ပြွတ့် ဖတ်ဗြစ်”
“အင့် အင့် အင့်၊အားလားလာ့းကျွတ်ကျွတ်”
“ပြွတ့်ပြွတ့်ပြွတ့်ပြွတ်”
“အင့်အင့် ၊ အင့်အအား ၊ အိအိ ၊အင့်”
“မနွယ့်”
“နွယ့်”
“အာ့ ဘာမှန်းလဲမသိဘူး”
“ဟင့်အင့်းသေးသေးလေး”
“ကိုင်ကြည့်စမ်းနွယ့် လုံးပတ်ကရော”
“အာမကိုင်ချင်ပါဘူး ၊ သူ့ဟာကကြီးပါတယ်ဆိုမှပဲ”
“အင်းပေါ့ ၊ အဲဒီဒစ်ကြီးကနွယ့်စောက်ပတ်ထဲကအသားမျှင်တွေကိုဆွဲထုတ်ယူသွားတော့ပိုအရသာရှိ
“ဟုတ်တယ် ၊ ကို့လီးကြီးနဲ့လိုးတာကကိုမျိုးဝင်းလီးနဲ့လိုးတာနဲ့မတူဘူး”
“ဟုတ်လား ၊ နွယ်ဘယ်လိုခံစားရလဲ”
“ပြွတ်ပြွတ့်ပြွတ်ပြွတ်”
“စုပ်စုပ် ၊ ခပ်နာနာလေးစုပ်”
“အင်းပေါ့ ၊ အသက်ရှုမှမဝတာ”
“အ့ ယားတယ် ၊ အဟင့် အို အို အ”
“လုပ်ပါတော့ ၊ ဒီမှာသေတော့မယ်”
“ဟင်း ၊ သူပဲမတရားဆွနေပြီးတော့”
“အာ ၊ ဟင့်အင်းကွာ၊တော်ကြာဒေါ်လေးပြန်လာတော့မယ်၊မြန်မြန်လုပ်ပါကိုရာ”
“တော်ပြီကွာ၊တစ်ကိုယ်လုံးဘာအဝတ်မှမရှိတော့ဘူး ၊ နွယ်ရှက်တယ်”
“အော် နွယ်ကလဲ ၊ နွယ့်စောက်ပတ်ကိုကိုယ်မြင်နေရသလိုကိုယ့်လီးကိုလဲနွယ်ကစုပ်တောင်
စုပ်ပေးပြီးပြီပဲဟာ၊ ဘာရှက်စရာရှိလဲ ၊ ချွတ်လိုက်ပါကွာနော်”
“ကဲကဲ ၊ ရော့လုပ်ချင်သလိုသာလုပ်တော့”
“ဗြစ့်ဖွတ်ဇွိ”
“ပြွတ့် ဖွတ့် ပြွတ်ပလပ့် ပြွတ်”
“ပြွတ့်စွပ်စွတ်ပြွတ့်ပြွတ်ပလပ့် ဖွတ့် ပြွတ်ပြွတ်”
“ပြွတ့်ဖတ်ဖတ့်ပြွတ်”
“ပြွတ့်ဖွတ်စွတ့် ဘွပ်ဘွပ့် ပြွတ်”
“အအ ၊ အရေတွေအရမ်းထွက်တာပဲနော် ၊ အအိ အင့်အင့်”
“အကျယ်ကြီးပဲ ၊ ဘေးအိမ်တွေကြားကုန်မှာပေါ့”
“ဟုတ်လား ၊ မြန်လှချည်လား”
“လိုးစမ်းပါကိုရယ် ၊ တအားကုန်လိုးစမ်းပါ”
“ထွက်ပြီ ၊ ထွက်ကုန်ပြီ့အားအားအား”
ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ
aaungygn on Wed May 04, 2011 4:42 am
ကျွန်တော်မရှင်းလို့ ... လင်ရှိပြီးသား/ယောင်္ကျားတယောက်နဲ့အိပ်ဖူးပြီးသား မိန်းမက အဲ့လိုမျိုး ထက်ကွဲပြီး သွေးစို့ တတ်လား???
Myanmar Sex on Wed May 04, 2011 9:55 pm
aaungygn wrote: ကျွန်တော်မရှင်းလို့ ... လင်ရှိပြီးသား/ယောင်္ကျားတယောက်နဲ့အိပ်ဖူးပြီးသား မိန်းမက အဲ့လိုမျိုး ထက်ကွဲပြီး သွေးစို့ တတ်လား???
ဖြစ်တက်ပါတယ် တစ်ခါတလေပေါ့ မဆက်ဆံတာကြာတဲ့အခါတို့ ဆက်ဆံနေကျထက် ကြီးတဲ့ လိင်တံနဲ့ တွေ့တဲ့အခါတို့ ဖြစ်တက်ပါတယ်
aaungygn on Fri May 06, 2011 2:17 am
အဲ့လိုဆိုရင် ... ပထမလောက်တော့ ဘယ်သွေးထွက်မလဲနော်....
အကယ်လို့ ... သူမက ပထမအကြိမ်ဆိုရင်... သွေးဘယ်လောက်ထွက်နိုင်သလဲ...တစက်... နှစ်စက်ပဲလား???
သိရသလောက်တော့ ပထမအကြိမ်ဆိုရင်... စစချင်းဆက်ဆံတယ့်အခါ တုတ်နဲ့ထိုးနေသလိုပဲတယ့်... ဘယ်လိုမှမခံနိုင်ဘူးတယ့်... ယောက်င်္ကျားယူဖို့တောင်ကြောက်သွားတယ်တယ့်... သူ့ယောက်င်္ကျားလဲအဲ့ဒီအချိန်တုံးကဘယ်လိုမှဆက်လုပ်လို့မရဘူး... သူမကဆက်လုပ်ဖို့ငြင်းဆန်လို့...(အကယ်လို့ဆက်လုပ်မိယင် အစဉ်ပြေနိုင်လား) ဒါပင်မယ့်ဆက်မလုပ်မိပါဘူး..ရပ်လိုက်တယ်... နောက်ရက်ကျတော့အစဉ်ပြေသွားတယ်ဆိုဘဲ..
Myanmar Sex on Mon May 09, 2011 11:21 am
aaungygn wrote: အဲ့လိုဆိုရင် ... ပထမလောက်တော့ ဘယ်သွေးထွက်မလဲနော်....
စစချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါ အရမ်းနာစေပါတယ် အဲဒါကို ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ် ဆက်မလုပ်ဘူးဆိုရင် လိင်ကိစ္စကို အရမ်းကြောက်သွားနိုင်ပါတယ်